Midowga Afrika oo kulan gaar ah ka yeelanaya Xaaladda dalka Soomaaliya • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Midowga Afrika oo kulan gaar ah ka yeelanaya Xaaladda dalka Soomaaliya
Tagged With: AMISOM, Midowga Afrika
Midowga Afrika oo kulan gaar ah ka yeelanaya Xaaladda dalka Soomaaliya
Ururka Midowga Afrika ayaa lagu wada in u dhowaan kulan ka yeesho xaaladda iminka ka taagan dalka Soomaaliya,iyadoo ay kasoo qayb gali doonaan dhamaan Madaxda wadamada uu ka koobanyahay Ururku.
El-Ghasim Wanne oo ka mid ah masuuliyinta AU ayaa sheegay in kulanka uu ahaan doono mid looga arinsado sidii nabad iyo xasilooni loogu soo dabaali lahaa dalka Soomaaliya,lana joojin lahaa dagaaladda aan dhamaadka lahayn ee ka socda.
” Waxaan u diyaar garoobayna kulan bilaaban doona 17-ka Bishaan oo looga hadli doono arrimaha dalka Soomaaliya kaas oo lagaga arinsan doono xaaladda iminka dalkaasi ka jirta….waxaana si weyn loogu goorfeyn doona sidii xal loogu heli lahaa dhibaatooyinka dhanka amniga ah…”,ayuu yiri El-Ghasim.
Waxaana uu hadalkiisa ku daray in kulankaas sidoo kale diiradda loogu saari doono in Ciidan nabad ilaalineed oo dheeri ah loogu soo diro dalka Soomaaliya oo ka qayb qaata howlaha nabad ilaalinta ah ee AMISOM.
” Kulanka ayaa ahaan doona mid looga hadli doono howlgalada uu Ururku wado iyo sidii Ciidan dheeri ah Muqdisho loogu diri lahaa oo xoojiya kuwi hore. Sidoo kale kama marna qaabkii loo xoojin lahaa DFKM ah ee Soomaaliya taageerada aan siino”,ayuu yiri masuulkaasi.
Mr.Wane ayaa sheegay in Ciidanka nabad ilaalinta ee AMISOM ee ku sugan magaaladda Muqdisho arimahooda loogu soo hadal qaadi doono inta usocdo kulanka iyo hawlihii illaa iyo hada u hirgalay tan iyo intii hawlgalkaasi uu bilowday.
” Waxaan u hubnaa in ay sameeyeen Shaqo wanaagsan iyadoo ay ku jiraan howl adag. sida aad ula socotaan 5,300-Askari ayaa halkaas ku sugan waxaana ay samaynayaan howlo adag oo dadaal badan ay ku bixiyaan oo ay ka mid tahay garab siinta Ciidanka DFKM ah, waxaana isku deynayna in aan sii xoojino taageradooda”,ayuu yiri sarkaalkan ka tirsaN Midowga Afrika.
Kulanka inta uu socdo ayaa lagu wadaa in ay kasoo qaybgalaan masuuliyin ka tirsan kuwa DFKM ah ee Soomaaliya oo ka warbixin doona baahida ay hada qabaan iyo habka uu Midowga Afrika u taageeri karo.
Dowlada Federaalka Kumeel Gaarka ee fadhigoodu yahay Muqdisho, ayaa indhawaale xooga saarayey inay taageero militari ka helaan wadamada Midowga Afrika, si ay u bilaabaan olole ay ku doonayaan in ay gacanta ku dhigaan deegaano kamid ah koonfurta Soomaaliya, waxaanse weli la ogeyn in taageerada ay u baahan tahay DFKMG ay ka heli doonto wadamada Midowga Afrika oo hada aan heyn dhaqaale ku filian hawlgalo balaaran oo dhanka Militariga ah.